HomeWhy should we celebrate menstruation?
(၁). လူ့ခန္ဓာကိုယ်မှာ သွေးလွှတ်ကြောနဲ့သွေးပြန်ကြောရယ်လို့ နှလုံးကနေတဆင့်သွေးလှည့်ပတ်မှုမှာ အဓိကအလုပ်လုပ်တဲ့ သွေးကြော ၂ မျိုးရှိပါတယ်။ နှလုံးရဲ့ဘယ်ဘက်ခြမ်းကနေ သွေးလွှတ်ကြောက အောက်စီဂျင်အပါအဝင် ခန္ဓာကိုယ်အတွက်လိုအပ်တဲ့ အခြားအာဟာရတွေနဲ့ သန့်စင်တဲ့သွေးကိုထုတ်ပေးတာပါ။
သွေးပြန်ကြောကတော့ အသုံးပြုပြီးတဲ့ ညစ်ညမ်းတဲ့ သွေးတွေကိုပြန်လည်ပတ်သယ်ဆောင်တာပေးတာပါ။ သွေးပြန်ကြောကိုရောက်ရှိလာတဲ့သွေးဟာ အောက်စီဂျင်အလွန်နည်းပါးပြီကာဘွန်ဒိုင်အောက်ဆိုဒ်ပါရှိတယ်။ ရာသီသွေးရဲ့ ၇၀ရာခိုင်နှုန်းဟာ သွေးလွှတ်ကြောကလာတဲ့ အောက်စီဂျင်နဲ့ အာဟာရဓာတ်ပြည့်တဲ့ သန့်စင်တဲ့သွေးတွေဖြစ်ပါတယ်။
(၂) ရာသီသွေးဟာ မိခင်ဝမ်းဗိုက်ထဲမှာ သန္ဓေတည်ခဲ့ဖူးတဲ့ လူသားတိုင်းရဲ့ အသက်သွေးဖြစ်တယ်။လူသားတိုင်းရဲ့ပထမဦးဆုံး အစာအာဟာရလည်းဖြစ်တယ်။ မိခင်ကကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန် ၉ လအတွင်းမှာ ချက်ကြိုးကတစ်ဆင့် ဒီသွေးတွေကိုပို့လွှတ်ပေးပြီး ဒီသွေးထဲမှာပါတဲ့ အောက်စီဂျင်အပါအဝင်အခြားဓာတ်သတ္တုနဲ့အာဟာရတွေကို စုပ်ယူစားသုံးပြီး ကျွန်မတို့အသက်ဆက်ရှင်သန်ခဲ့ကြတယ်။ ရာသီသွေးဆိုတာ တစ်နည်းအားဖြင့် သားအိမ်ထဲမှာရှိတဲ့သွေးဟာ သန္ဓေသားကပ်တွယ်ပြီးနေထိုင်နိုင်အောင် နူးညံ့ပြီးသန့်စင်တဲ့သွေးလည်းဖြစ်တယ်။ ၉လလုံးလုံး ကျွန်မတို့ ဒီသွေးတွေထဲမှာနေထိုင်ခဲ့ဖူးပါတယ်။ အကယ်၍သာ ရာသီသွေးကမသန့်ရှင်းဘူးဆို အလွန်နုနယ်တဲ့ သန္ဓေသားလေးတွေ ရှင်သန်ဖို့မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။
(၃) ရာသီသွေးက သွေးပုပ်တွေကျတာလား? ရာသီစက်ဝန်းကို ကြည့်မယ်ဆို ရာသီစလာတဲ့ရက်ကနေစပြီး ၁၄ရက်လောက်မှာ အမသားဥဖွံ့ဖြိုးလာပြီး သားအိမ်ထဲမှာ အဖိုမျိုးဥကလာရောက်ကပ်တွယ်ဖို့အဆင်သင့်ဖြစ်နေပါတယ်။ အဲ့ချိန်မှာ ခန္ဓာကိုယ်ကိုကျန်းမာစေတဲ့ အက်စထရ်ဂျင်ထုတ်ပေးပြီး အဲ့ဒီဟော်မုန်းကြောင့် သားအိမ်နံရံဟာလဲထူလာပြီး သန္ဓေတွယ်နိုင်အောင်ပြင်ဆင်ထားတယ်။ ၂၅ ရက်မြောက်နောက်ပိုင်းမှ ဖိုမျိုးဥနဲ့မတွေ့ဘူးဆိုရင် သားဥကြွေပြီး ဟော်မုန်းပမာဏလျော့နည်းကာ ခုနကသန္ဓေသားကပ်တွယ်နိုင်အောင် ပြင်ဆင်ထားတဲ့ ထူထဲတဲ့ သားအိမ်နံရံကလည်း ကြွေကျလာပါတယ်။ ဒီအခါ ရာသီသွေးဆင်းလာတာပါ။ အဲ့တာပုပ်သွားလို့ကြွေတာမဟုတ်သလို ပုပ်ပြီးမှကြွေကျတာမဟုတ်ပါဘူး။
(၄) လူ့ခန္ဓာကိုယ်က ထွက်တဲ့ဘယ်သွေးမဆို ညှီတဲ့အနံ့ အရသာရှိပါတယ်။ သွားဖုံးလေးကိုက်မိရင်လဲ ညှီတာပါပဲ။ ရာသီသွေးမှ ညှီတာမဟုတ်ပါဘူး။ ဘယ်သွေးမဆို ခန္ဓာကိုယ်ထဲကနေ အပြင်ကိုရောက်ပြီး လေးနာရီအကြာမှာပုပ်ပါတယ်။ ရာသီသွေးမှ မဟုတ်ပါဘူး။ သွေးတိုင်း လေးနာရီအကြာ ပုပ်တာပါ။
ဒါကြောင့် လူသားတစ်ဦးဖြစ်တည်ရှင်သန်ဖို့ အစပြုပေးတဲ့ ဒီသွေးဟာ ကျွန်မတို့ ကိုယ်ခန္ဓာမှာ သဘာဝအလျောက်ဖြစ်တည်နေတဲ့ အသက်သွေးဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် မိမိခန္ဓာကိုယ်ကို ဂုဏ်ယူသင့်ပါတယ်။ ဒါဟာ ရွံရှာဖွယ်ကိစ္စရပ်မဟုတ်သလို ရှက်ရွံ့စရာလဲမလိုပါဘူး။ လှောင်ပြောင်ကဲ့ရဲ့စရာကိစ္စလည်း မဟုတ်ပါဘူး။
လူသားတို့ရဲ့ ဓမ္မတာဖြစ်ရိုးဖြစ်စဉ်ဖြစ်လို့ ဓမ္မတာလို့ခေါ်တာပါ။ အမေတွေ အဖွားတွေ ဟိုးလူ့သမိုင်းအစဉ်အဆက်ကမိန်းမတွေလည်း ရာသီလာခဲ့တာပါပဲ။ ဒါကို အမျိုးသားတိုင်းလည်း သိတာပဲ။
ဒါကို ဒီလိုနေ့မျိုးမှာ ဒီလိုဖြစ်နေလို့ သိသွားမလား မြင်သွားမလား ရွံစရာရယ်လို့ စိတ်တင်းကျပ်မှုတွေ ဖြစ်စရာမလိုပါဘူး။ အမျိုးသားတွေအနေနဲ့လည်း ဒါကို မတော်တဆမြင်ရင်တွေ့ရင် လှောင်တာ ကဲ့ရဲ့တာ နှာခေါင်းရှုံ့တာတွေ မလုပ်သင့်တော့ပါဘူး။ စိတ်တင်းကျပ်မှုတွေဖြစ်စေမယ့် စစရာ နောက်စရာလို့ထင်နေတဲ့ သူတွေကိုလည်း အပေါ်ကအချက်တွေကို ပြန်ရှင်းပြလိုက်ပါ။ ကိုယ့်ခန္ဓာကိုယ်က စွမ်းအင်စစ်စစ်ဖြစ်တဲ့အတွက် ကိုယ့်ကိုယ်ကို ဂုဏ်ယူပြီး ပေါ့ပေါ့ပါးပါးဖြတ်သန်းစေချင်တာပါ။
ပိုဆိုးတာက ညစ်ပတ်တယ် မမြင်အပ်လို့ လက်ခံယူဆထားတဲ့အတွက် ကျွန်မတို့မိန်းကလေးတွေက အတွင်းခံတွေ ရာသီသွေးပေတဲ့အဝတ်တွေကို ချောင်ကလောင်ထဲ ထိုးသိပ်ပြီးထည့်ထားကြတတ်တယ်။ ကျေးလက်တောရွာတွေမှာဆိုပိုဆိုး။ ညစ်ပတ်နေတဲ့ အိမ်သာကြမ်းပြင် ရေချိုးခန်းထောင့်တွေမှာ ဆေးကြောကြတယ်။ လှန်းတော့လည်း လူမမြင်သူမမြင် လှန်းရာက နေရောင်မရ လေမရနဲ့ ကိုယ်ခန္ဓာအတွက် မသန့်ရှင်းတဲ့ မှိုတွေ ပိုးမွှားတွေပေါက်ဖွားစေတယ်။ အဲ့ကနေတဆင့် မျိုးပွားအင်္ဂါနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ ရောဂါတွေရကြတယ်။
မိန်းကလေးတွေ အပျိုဖော်ဝင်ရင် အုပ်ထိန်းသူတွေအနေနဲ့ သေချာပြောပြပြီး ဂုဏ်ယူတတ်စေဖို့လိုပါတယ်။ ဒီလိုဖြစ်လာမယ့် ရက်ကြီးကို တထိတ်ထိတ်နဲ့တွေးပူပြီး ရာသီလာရင် ဟိုဟာမလုပ်ရဲ ဒီဟာမလုပ်ရဲ မဖြစ်ဖို့ ရာသီလာချိန်မှာ ခံစားရတဲ့ ကိုက်ခဲမှုအပြင် စိတ်ပင်ပန်းမှု တင်းကြပ်မှုတွေမဖြစ်စေဖို့ကို သေချာပြောပြထားဖို့ လိုပါတယ်။ ဥပမာ သမီးလေး လူကြီးဖြစ်ပြီ ပိုလှလာမှာ။ ပိုကျန်းမာကြံ့ခိုင်လာမှာ။ အက်စထရိုဂျင်က အရိုးအဆစ်သန်မာစေတယ်…စသဖြင့် အကောင်းဘက်ကနေ ပြောပြပေးဖို့လိုပါတယ်။
ဒါကြောင့် ရာသီသွေးက လူသားတစ်ယောက်ဖြစ်တည်ဖို့ ဘယ်လောက်အရေးပါတဲ့ သွေးလည်းဆိုတာ သိကြဖို့ရယ် မညစ်ပတ်ဘူးဆိုတာ သိပြီးတော့ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ဂုဏ်ယူလိုက်ပါ။
ဆောင်းပါးရှင် – Phoebe